TTSweet: ငါးဆုတ်လုံးနှင့် ချက်သော မန္တလေး မုန့်တီ။
Aunty Tint January 27, 2013 at 3:08 PM
စားချင်စရာ မုန့်တီသုပ်လေးပါလား ဆွိတီရေ။ အိမ်ရှင်မဖြစ်သူက အစားကောင်းကြိုက်တော့ အိမ်ကမိသားစုကံကောင်းတယ်း)
တီတင့်လည်း မန္တလေးရောက်ရင် အရင်ဆုံးရှာစားတာ မုန့်တီသုပ်ပဲး)
အိမ်မှာလည်း အလုပ်မရှိမုန့်တီသုပ်စားလေ့ရှိတယ် ဟိဟိ
San San Htun January 27, 2013 at 3:55 PM
SHWE ZIN U January 27, 2013 at 5:06 PM
တပုံထဲ ပါဘဲ စားကြည့်ရင်တော့ ပိုသိမှာနော် ဟောဒီဘက်က သုံးပွဲလောက်
maynyeinchan January 27, 2013 at 9:09 PM
maynyeinchan January 27, 2013 at 9:10 PM
26.12.12 က ပို့တဲ့ မေးလေးမရောက်ဘူးလားဟင်
သမီးက အန်တီတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆင်ပြေလားလှမ်းမေးတာပါ။
AMK January 27, 2013 at 10:00 PM
ဟင်းချိုက မိုက်စ် စားချင်စ၇ာကြီးပဲ တီဆွိ နောက်တခေါက် ဘုန်းကြီးကျောင်းဈေးရောင်းပွဲမှာ ထည့်နော်ေ၇ေ၇လည်လည် လာအားပေးမယ်
You made me trouble. Today is Monday. I have to wait until Saturday to cook this. Poor thing....
ko9January 28, 2013 at 4:15 PM
ကောင်း/ ဆိုး/ သင့် /ညံ့ ဖြေဆိုပါ...:D
Theingi January 30, 2013 at 5:23 AM
TT Sweet ရေ ညီမကမန်းလေးသူဆိုတော့ တော်တော်လေးကိုဒါကိုကြည့်ပြီး စားချင်သွားပြီ....တချို့ဆိုင်တွေမှာ ဟင်းချိုအိုးထဲက ငါးရိုးကိုတောင် သက်သက်ရောင်းသေးတယ်....ပဲသီးစိမ်းလေးပါးပါးထည့်၊ဗရာကြော်လေးပါ ညှပ်ထည့်ပြီးစား(မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်နေတာပါ)
Zarchi January 30, 2013 at 2:55 PM
အော် အဖြစ်အဖြစ် ဗိုက်ဆာပီး စားစရာမရှိလို့ စိတ်တိုနေတာ..မနေနိုင်မထိုင်နိုင် TT Sweet ပေ့ခ်ျလေးကြည့်မိတာ ခုတော့ ဒွတ်ခနဲ့ လှလှနဲ့တွေ့နေပါပေါ့..ရှလွတ် ရှလွတ် ရှလွတ် (သွားရည်ကျသံ)...:E
မုန်.တီသုတ်ဆိုပေမယ်. ရန်ကုန်က နန်းကြီးသုတ်နဲ.အတူတူလောက်ဘဲထင်တယ်နော်။
အဲ.ဒီထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးကိုအနှစ်ချက်ပြီးထည်.သုတ်တော. အရသာက ချဉ်တင်တင်မနေဘူးလားဟင်
T T Sweet February 11, 2013 at 12:44 PM
ခရမ်းချဉ်သီးကို ကြက်သွန်အနှစ်များများနဲ့ချက်တော့ အချဉ်ပျောက်သွားပါတယ်။ ကြက်သွန်နီက ချိုတာကိုး။ မုန့်တီသုတ်ကလဲ အဲဒီအရသာလေးနဲ့ ပဲမှုန့်နဲ့တင် တော်တော်ကောင်းနေပြီ။
naychisunshine February 9, 2013 at 10:45 PM
Aunty Sweet yay.. Myanmar font ma shi lo burglish na' pa' type p ask pa ya say naw..
I just migrant Aussie from Singapore par..
Cat fish shar lo ma ya lo lay..bal fish na` mote hin khar cook yin kaung ma la` Aunty sweet yal.. Thanks alot naw Aunty sweet :)
T T Sweet February 11, 2013 at 12:50 PM
ငါးခူက ဆစ်ဒနီမှာဆိုရင်တော့ ဖလင်မန်တန်ဈေးမှာ ရတတ်ပါတယ်။ တီဆွိကတော့ စင်္ကာပူမှာကတည်းက မုန့်ဟင်းခါးကို ငါးခူ၊ ငါးကျည်း မဟုတ်ပဲ ချက်စားနေတာ ကြာပေါ့။ စင်္ကာပူမှာတုံးက တော့ sea bass လို့ခေါ်တဲ့ငါးနဲ့ချက်တယ်။ သူက ငါးမြစ်ချင်းတို့ ငါးကြင်းတို့လို ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ အိမ်မှာတော့ ဘာချက်ချက် လက်စွဲပဲ။
ဒီမှာလဲ sea bass ရှိတယ်။ တစ်ကေဂျီ ၁၄ ကျပ်လောက်ရှိတယ်။ အန်တီဆွိကတော့ သူ့ထက် ပိုလဲဈေးချို အသားချဉ်းပဲရတဲ့ basa fillet နဲ့ပဲ ချက်တယ်။ ဟင်းချိုအောင်ကျ ဆယ်လ်မွန်ငါးရိုးတွေ ၀ယ်ပြုတ်ပြီး အဲဒီ အရည်နဲ့ ချက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ စပါးလင်နိူင်ရင် တော်ရုံငါး၊ ဘာငါးနဲ့ချက်ချက်ကောင်းပါတယ်။
naychisunshine February 12, 2013 at 4:03 PM
Hote ka' par Aunty Sweet. Thanks u so much for reply naw..
ah ma u made me hungry I miss soe soe mont ti last time visit previous4years ago when I arrived mandalay lucky for me cause morning so I going to soe soe mont ti shop eat it two plate everything is good but hard to find car parking but ok that's delicious thanks ah ma I made by myself not really same hard to find chip pea powder (pe hmont ) anyway thanks ahma aung moe